XOG CULUS:Gudoomiye Jawaari oo durba Bilaabay Caawa Arimo Shaki badan dhaliyey +Sadex Musharax oo .. | jubbaland news
XOG CULUS:Gudoomiye Jawaari oo durba Bilaabay Caawa Arimo Shaki badan dhaliyey +Sadex Musharax oo ..
Waxaa maanta doorasho xasaasi ah oo ka dhacday xarunta golaha Shacabka lagu doortay gudoomiyaha barlamaanka Maxamed Sh Cismaan Jawaari,Waxaan Caawa Soo baxaya Xogo hoose oo sheegay in Gudoomiye Maxamed Cismaan Jawaari uu Shirar hoose la qaatay Kooxdii Damul-Jadiid oo Xusul duub oogu jira soo saarid Gudoomiye Kuxigeenka Baarlamaanka oo ay u wataan Faarax Cabdiqaadir.
Wixii maanta dhacay ayaa waxay ay daaqada ka saareysaa musharaxnimadii madaxweynanimo ee Shariif Xasan Sh Aadan, maadamaa awood qeybsi dhanka beelaha ah ay ku heleen gudoomiyaha barlamaanka.
Dhanka kala waxaa soo baxaya Saadaal dadka Soomaalidu ayna fili karin iyo musharaxiinta Madaxwaynaha ee uu midkood la safan doono, waxaan halkan idiinku soo gudbinaynaa sedex Musharax oo ay ubadan tahay in midkood uu garab siiyo Jawaari.
1-Xasan Sh: Madaxweynaha xilkiisa dhamaaday ayaa u ololeeyay isbahaysi ka koobnaa Hawiye iyo Daarood kuwaas oo ka shaqeeyay in Jawaari loo doorto gudoomiyaha barlamaanka.
2-RW Cumar Cabdi Rashiid – Dad badan ayaa aamisan in beesha Daarood ay awoodooda isugu geysay in Xidig uusan noqon gudoomiyaha barlamaanka, hase ahatee XIDIG ayaa helay codadka xildhibaanadii Koofur Galbeed iyo kuwa ay Jubbaland iskala soo baxeen.
HALKAN KA DAAWO MUUQAAL CAJIIB AH.